yaBaxhamli beKamva lethu
Umnxeba ovela kuBantu
I-unCommission lithuba elikhulu, elahlukileyo, kunye nelokuthatha inxaxheba apho abantu abatsha abangama-600 babelane ngamava abo ukuchonga imiba esele ilungile kwikamva lokufunda kwe-STEM kunye nethuba.
Ukusuka kula mabali, kwavela ukuqonda okuthathu okwalatha indlela eya phambili ekufezekiseni imfundo ye-STEM elinganayo kubo bonke abantwana belizwe lethu, ngakumbi kuluntu oluNtsundu, lwaseLatinx, kunye nolweNative American.
Ulutsha alukhange lunikezele; bagxothiwe kwaye bafuna ukwenza umahluko nge-STEM.
Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abatsha bazive bekwi-STEM.
Ootitshala bangawona mandla anamandla okukhuthaza ukubakho kwi-STEM.
Iminyaka yobudala (iminyaka ephakathi)
Owasetyhini okanye ongeyena-binary
Ababalisi bamabali abave kwi-a
umntu omdala onenkxaso malunga nebali labo
States, kuquka iWashington, DC
Phulaphula amabali abo
Iimbono ezivela kubabalisi bamabali abangaKhomishini ziyasikhokela 100Kin10'Isigaba seminyaka elishumi ezayo yomsebenzi wokukhulula isizukulwana esilandelayo sabaqambi nabasombululi beengxaki. I-100Kin10, eyaqala ngo-2011 ukuphendula Ubizo lukaMongameli u-Obama lwe-100,000 entsha, ootitshala be-STEM abagqwesileyo kwiminyaka elishumi kwaye yagqitha le njongo ngo-2021, sijonge phambili ekuthatheni oko kuvela kwiKhomishini njengenjongo yethu ekwabelwana ngayo, yesizwe. Injongo entsha ye-100Kin10 kunye nenethiwekhi iya kuqaliswa ekwindla ka-2022.